म अमेरिकी थामी | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 09/20/2010 - 05:30
सेतो पहिरन कम्मरमा सेतै रङको पटुका अगाडि पछाडि झरेका फुर्का पनि, शरीर माथि भने घण्टै-घण्टाको माला भिरेका एक अर्ध बैँसे थामी दृश्यमा देखा परे । सुकुलमा पलेटी कसेका थिए उनी । एक हातमा ढ्याङ्ग्रो थियो, अर्को हातमा गजा । त्यसैले ठोक्दै कामेका मात्र थिएनन । एक तमासले के-के हो,फलाक्दै पनि थिए ।
'योहो त्याङ्, तो वे गाई.....' एक्कासी एक अर्धबैँसे चिच्याए । दृ्श्य हेरिरहेका सबैको मौनता तोडियो । फलतः सबैको नजर उनीतर्फ मोडियो । अनि हल भरियो, गजबको हासोेले । सबै जना हासे तर उनी हाँस्न सकेनन् । नमज्जासँग लजाए पो । शिरबाट टोपी झिके । त्यहीभित्र अनुहार लुकाउने प्रयास गरे ।
दृश्यमा देखिएका उनी नै रहेछन्, सेतो पर्दामा एक्कासी आफ्नो दृश्य देखेर खुसी भएका रहेछन् । नाम माइला झाँक्रि । गाउँमा माइला गुरु भनेपछि सबैले चिन्ने, उनलाई ।
सबैको ध्यान फेरि पर्दामा दौडिएका दृश्यले खिच्यो । बेहुला अन्माएसँगै दृश्यको सरूवात दोलखाको सुप्पा गाउँबाट भयो । पछि सिन्धुपाल्चोकको थामी गाउँ देखियो । रातो चोलो, फरिया पनि रातै, चिरिच्याट्ट परेकी बेहुली बुइ हाल्दै घरको ढोकाबाट निकालीएको दृृश्य । त्यसपछि भने पर्दामा नेपाल हैन दार्जलिङका थामी बस्तीका दृश्य देखिए । नेपालको थामी बस्तीमा विवाह संस्कार देखाइएको थियो भने दार्जिलिङको थामी बस्तिमा मृत्यु संस्कार देखाएइएको थियो ।
दृश्य सकियो, सँगै तालीको पर्रा छुट्यो । स्टेज अगाडि एक विदेशी महिला देखापरिन् ।
'यसमा तपाईंहरूको केही भन्नु छ ?' दर्शक बनेर अगाडि बसेका थामीलाई उनले प्रश्न गरिन । प्रश्न नेपालीमा नै थियो । भाषा उच्चारण प्रस्ट थियो । खाट्टी नेपाली हुन्जस्तै लाग्ने ।
उनी थिइन, अमेरिकी नागरिक सारा श्नाइडरम्यान । उनले भर्खरै मात्र थामी जातिको इतिहास तथा संस्कार संस्कृतिमा विद्यावारिधी गरेकी थिइन् । त्यसैको लागि तयार पारिएका तयार दृश्यसहित सामग्रीका केही अशं हलमा देखाइएको रहेछ ।
विद्यावारिधि, त्यो पनि राज्यले बिर्सिएका थामी जातिको इतिहास तथा संस्कार संस्कृतिमा । बाटो बिर्सिएर अलपत्र परेको बटुवा झैँ इतिहासको पनामा बिल्कुल अलपत्र परेको थामी जातिको इतिहास तथा संस्कार संस्कृतिमा विद्यावारिधि हासिल गर्नु कम चुनौतिपूर्ण विषय होइन त्यो पनि सात समुन्द्र पारिबाट आएको मान्छेले । को हुन थामी ? राज्यले किन बिर्सिए थामीलाई ? यस्ता प्रश्नले चेत खुलेदेखि नै मलाई समेत सधँै सताइरहने । यसको सही उत्तर भने अहिले सम्म भेटाउन नसकेको । त्यसैले सुरूमा नै म उनीप्रति निक्कै जिज्ञासु भए । अब उनलाई त भेट्नै पर्यो, तर कसरी ? बेचैनीले तत्काल चिमोट्न थाल्यो । सोचे यसको छिनोफानो हलमा नै गराँै, तर कसरी ? त्यो पनि सम्भव देखिएन । एक छिनको कसरत पछि उनको फोन नम्बर भेटियो ।
समय बिहानको दस बजे । हेल्लो.... दुई घन्टीमा नै फोन उठ्यो । 'म सारा ! छोटो जवाफमा आफ्नो परिचय दिइन् । परिचयसँगै मैले भेट्न चाहनुकोे उद्देश्य बताएँ । उनले पनि सहमति जनाइन् । बानेश्वरमा भेट्ने कुरा मिल्यो ।
बेलुकाको पाँच बजे । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा अगाडिको पश्चिम गेट । म पुगिसकेको थिएँ । एकैछिनको पर्खाईपछि यामाहा भट्भटेमा उनी पनि आइन् । मैले उनलाई चिनेँ । सायद उनले मलाई चिन्न गाह्रो पर्यो । मैले परिचय दिएँ ।
'ओ... तपाईं नै हो, ल त्यसो भए लोङसेङििन सेवा ।'
उनले थामी भाषामा अभिवादन गरिन् । स्वयं थामीले समेत भाषा बिर्सेको अवस्थामा एक विदेशीले यसरी अभिवादन गर्दा कता-कता हृदय गदगद भएर आयो । मैले पनि त्यसै गरेँ ।
अगाडिको रेष्टुरेन्टमा जान उनैले प्रस्ताव गरिन । मैले सहमति जनाएँ ।
के लिनु हुन्छ ? मेनु हेर्दै उनले सोधिन । हैन केही नलिऔँ, मैले भने । पछि दुबैका लागि सोडा पानीको अडर भयो ।
"गफ अब हामैै्र भाषामा गरौँ है ?" उनीबाट अघिदेखि नै प्रभावित थिएँ, उनले उच्चारण गरेको 'हाम्रै भाषा' भन्ने शब्दावलीले त गला नै भरियो । मैले प्रश्न गरेँ" यो त हाम्रो पो भाषा हो त, कसरी तपाईंको भयो ?
"मेरो परिचय नै यो भएपछि, कहाँ यो तपाईंको मात्रै भयो, त ? यो त अब मेरो पनि हो । बडो गर्व साथ उनले भनिन् । आफ्नै जन्मथलोमा परिचय बिहिन अवस्थ्ाामा रहेको छ, थामी संस्कृति । सात समुन्द्रपारिबाट आएकी यिनले यसैमा आफ्नो परिचय भेट्टाइन् ।
"हेर्नुहोस्, वास्तवमा थामी संस्कार संस्कृति मेरो रगतमा छ । मैले १५ बर्ष बिताएँ थामीहरूसँग । यसबीचमा म थामी जातिको इतिहास सम्म पुगँे, त्यसको अध्ययन गरेँ । बर्तमान देखँे, कला संस्कृतिसँग खेलँे । दुःखभन्दा कैयौँ गुणा सुख पाएँ, अन्ततः त्यही नै मेरो परिचय बन्यो । त्यसैले म गर्वका साथ भन्छु, म थामी हुँ, अमेरिकन थामी, कसो त ?" म सँग सहमति मागिन् । मैले स्वीकृतिमा मुन्टो हल्लाएँ ।
म आफँै थामी भएकाले आफैँले देखेको छु धेरै थामीहरूले आफ्नो जातीय पहिचान लुकाउँदै हिँडेको यथार्थ । अनपढ थामीले त जातिय महत्त्व नबुझेर पनि परिचय लुकाए होलान् तर कतिपय ठाउँमा त पढे लेखेकाहरूले समेत लुकाए । यि विदेशी गर्वका साथ यसो भन्छन्, क्षणिक आकर्षणका कारण हैन न त कसैलाई खुसी पर्न नै ।
थामी जाति गरिब छ, तर धनमा मात्रै । अरुमा त कसैले उछिन्नै सक्दैन, यिनी भन्छिन् । थामी जातिको आफ्नै संस्कार छ, संस्कृति छ, भेष-भूषा छ । भाषा छ । समग्रमा एउटा सिङ्गो सभ्यता जीवित छ, थामी जातिमा । एउटा सभ्यताको जहाँ विकास भएको छ, त्यो जाति कसरी गरिब हुनसक्छ ?" उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन् ।
हुन पनि मर्दा होस् या पर्दा, सबै काम आफ्नै तौरतरिकाबाट हुन्छ । कसैबाट सापटी लिएर चलाउनुपर्दैन । विज्ञानले छलाङ मारिसकेको छ तर यो जातिमा यसको प्रभाव कमै परेको छ । तापनि जीवन चलेकै छ । मुलुकमा चारैतिर नाकाबन्दी लागोस् । यो जातिलाई खासै असर पार्दैन । यहाँ बाँच्ने शैली पहिले नै विकास भएको छ । जो आफ्नै कौशलबाट स्वतन्त्रापुर्वक बाँच्नसक्छ । त्यो कसरी गरिब हुन्छ ? सायद यिनले यो यथार्थलाई बुझिन् ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण अभियानभन्दा अघि थामीहरू पनि राज्य सञ्चालनमा हिस्सेदार थिए । थामीको इतिहास कोट्याउन थालिन्, उनले । राज्य एकीकरण पूर्व दोलखा स्वतन्त्र राज्य थियो । राज्य सञ्चालनको प्रमुख हिस्सेदार थामी, नेवार र तामाङ जाति थिए । यसको प्रमाण दोलखामा प्राप्त सन् १५६८ को शिलापत्र हो, उनी प्रमाण जुटाउँछिन् । त्यसबेलासम्म थामी जाति सांस्कृतिक रूपमा मात्र हैन आर्थिक रूपमा समेत सम्पन्न थियो । "तत्कालीन नेवार राजाले थामी माथि जब भूमि कर लगायो, थामीको दुर्दिन त्यहीँदेखि सुरू भयो," उनी बताउँछिन् ।
राज्य एकीकरणपछि त त्यसले अझ चरम रूप लियो । उनी थामी गरीब हुनुको थप कारण बताउँछिन । प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको शासनपछि जनजातिको जग्गा अधिग्रहण गर्न थालियो र शासकका आसेपासेलाई बाँड्न लागियो । यो मारमा थामीहरू पनि परे । त्यसपछि थामीहरूले टाउको उठाउने मौका कहिले पनि पाएनन् । थामीपछि पर्नुको जड कारण यही हो, यसको मार थामीहरूले अहिलेसम्म खेपिरहेका छन् " उनी बताउँछिन् ।
आश्विन १०, २०६७
अवरोधमा वार धेरै